HEGERLS pallet inonetsa
HEGERLS Selective Pallet Racking ndiyo yakanakisa mhinduro kumatura uko kuri kudiwa kuti uchengete akasiyana ezvinyorwa mumapallets. Inopa mukana wakananga kune ese mapallet e100% yekuwanika uye yakanaka stock kutenderera.
Mapallet anogona kuwanikwa, kuwanikwa uye kutamiswa zvakasiyana kupa nekukurumidza kubata kwezvinhu zvine palletized. Inopa nyore danda kugadzirisa uye inogarisa akasiyana pallet pakakwirira.
HEGERLS pallet racking Zvimiro
◆ Yakakwira density sisitimu yekuchengetera kuchengetedza mapallet, mashandisiro ekuchengetedza imba;
Yekutanga-yekupedzisira-yekupedzisira nzira yekuwana;
◆ Kumusoro uye kumashure kwekusimbisa zvinoshandiswa kugadzirisa kunongedza kwese, zvichiita kuti racking yese igadzikane uye ive yakachengeteka;
◆ Mahara ekutanga mapallet anogona kuiswa pane inotungamira njanji;
◆ Kuchinja uye nyore kuisa, kugadzirisa nzvimbo mashandisiro.
HEGERLS pallet racking Ruzivo
Bhokisi danda dudziro
HEGERLS rinorema basa rekuchengetedza shefu 2021 yemhando yepamusoro 3000kgs pane yega inosanganisira masherufu esimbi
Isu tinopa HEGERLS rinorema basa masherufu rack 2021 yemhando yepamusoro 3000kgs pane yega inosanganisira masherufu esimbi. Isu tinozvipira kudura rekuchengetera munda kwemakore makumi maviri neshanu. Tiri kutarisira kuva wako kwenguva refu naye mu China.
1.Product sumo pasherefu pani
HEGERLS shelving yaisanganisira furemu, nhanho matanda, simbi decking. Iyo yakadzika inogona kuve 500mm, 600mm kana yakagadzirirwa. Yakareba span shelving inonyanya kukodzera ruoko rwakatakurwa zvinhu. Kuiswa kwese nhanho kunogona kuve 300kgs, 500kgs kana 800kgs zvimwe.
3.1 Nhanho danda tsananguro
4.Production udzamu pasherefu pani4.1Inogona kushandiswa yoga kana kusununguka kubatanidzwa pamwechete mune chero fomu uye mune chero maindasitiri. 4.2Iyo yakadzika inogona kuve 300mm, 500mm, 600mm kana imwe saizi.
4.3the kurodha kwega kwega rukoko kunogona kuva 300kgs, 500kgs, 800kgs, humwe huremu hunogona kuve hwakakosha chinodikanwa.
Iyo huni inogona kunge iri 50mm. 4Product qualification yesherefu rack
Pashure: HEGERLS sundira kumashure racking system
Zvadaro: Warehouse Kuchengetera Heavy Duty Simbi Pallet Racking Sisitimu
Nhovo Rack Vagadziri
Nhovo Rack System